Tsena vita fety ao Antsirabe - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Naresaka tsy nisy ohatr’izany ny fetin’ny paka tao Antsirabe sy ny manodidina azy, fotoana nanararaotan’ny mpivarotra nangoronam-bola sady andro nandanian’ny tsirairay vola ihany koa. Zovy no tsy mahalala an’izany tsena vita fety izany, izay mampimenomenona ireo mpivarotra any an-toerana amin’izao fotoana izao. Nanamafy ihany koa ity olona tompona fivarotan-kena iray ao antsenakely ity, fa tsy nisy fiovana velively ny vidin-kena ao an-tsena, ary raha mandany omby roa isan’andro izy ireo nandritra iny fety iny, dia zara raha omby iray no lany ankehitriny. Araka izany, miahaka daholo ny ankamaroan’ny entam-barotra, afa-tsy ny kojakoja izay ilaina amin’ny fiainana andavanandro toy ny menaka, ny sira, ny savony, ny siramamy sy ny kafe. Fararanom-bokatra ny mponin’ny vakinankaratra amin’izao, amidy mora ihany koa noho izany, kanefa tsy araka ny nieritreretana azy hoy Rakotondranaivo Edmond, mpampiakatra vokatra ao an-tsena Asabotsy avy any Ambano, fa tena alefa amin’ny masonkarena ihany. Noho izany, miantraika any amin’ny tantsaha mpamokatra mihitsy ny tsy fandehan’ny tsena. Na ny vary samy hafa aza dia lasa mitovy vidy, ka samy dimam-polo sy telon-jato sy arivo avokoa. Na dia izany aza, dia mbola mitsitaitaika hatrany ny mpividy, ka mitoretra eo am-pivarotana ny sasany amin’ireo mpivarotra. Ny mpanao ambongadiny kosa, lasa mihidy tanteraka raha vao amin’ny 12 antoandro, ary tsy mivoha raha tsy amin’ny 2 ora sy sasany. Hita taratra amin’ny fahefa-mividy tokoa fa kirizy ara-bola ny olona amin’izao ary tsapa fa mihafy ny vahoaka noho ny antony maro : teo ny fanarenana isankarazany ny ravan’ny rivo-doza, eo ihany koa ny fetin’ny paka izay naharitra ny efarana raha ny tao Antsirabe manokana no jerena. Manoloana izany rehetra izany, dia miezaka mitady fomba sy teknika ihany ireo mpivarotra ao an-toerana mba hisintonana ny olona hividy, ka amin’ny asabotsy tontolo andro izao dia hanao fampirantina sy varotra isankarazany ny ao an-tampon-tanàna, eo anoloan’ny tranompokonolona Antsirabe ambonivohitra. Manantena ireo vondron’ny mpikarakara io hetsika io fa ho betsaka ny olona hotonga amin’io satria hisy fihenam-bidy sy fanentanana samihafa.
Maty antoka ireo mpivaro-boankazo
Ny voankazo toy ny paoma sy ny kaky no tena mampalaza an’Antsirabe, tsy ory amin’izany mihitsy ity faritr’i Vakinankaratra ity satria manana hazo fihinam-boa maro karazana ary mamokatra mifanesy mandavan-taona. Somary ambanivohitra sy am-polony kilaometatra maro ihany no hiotazana azy ireto, saingy ny mampalahelo dia sarotra ny fitaterana ka tsy maintsy lolohavina avy any ifotony, ary betsaka ny simba mandram-pahatongany eny an-tsena. Ny kaky no tena betsaka amin’izao ary efa maletaka loatra ka mananosarotra ny fivarotana azy, noho izany dia atao farany izay haingana ny handafosana azy mba tsy ho vola ariana fotsiny. Ny ankabeazan’ireo mpivarotra, dia miala maina fotsiny fa tsy mahalafo, na dia roan-jato monja aza ny iray kilao amin’ity karazam-boankazo ity. Mbola fotodrafitrasa lehibe tokony hatsangana ao Antsirabe hoy ny mponina ao, ny orinasa mpanodina voankazo.
Ankoatra izay hoy ihany izy ireo dia, olana ho an’ny tantsaha izany hanondrana izany noho ny enti-manana tsy misy sady tsy misy manosika sy manohana rahateo. Mampaharikoriko manko hoy ity renim-pianakaviana ity ny fofona aterak’ireny voankazo lo sady mampisavovona lalitra etsy eroa ireny. Izany rehetra izany anefa dia faty antok’ireo mpivaro-boankazo avokoa, satria tsisy na inona na inona azo atao intsony rehefa tsy misy mividy ny kaky na ny poara sy ny paoma fa tsy maintsy ariana. Anisan’ny tombony ho an’ny ao Vakinankaratra manokana ary tokony hahay manararaotra izany voankazo izany ny tsirairay. Izy mbola natoraly iny manko no tena misy ny vitamina mitondra hery sy tanjaka izay ilain’ny vatana. Tsy faty antoka ho anao mihitsy rahateo ny fihinanana azy, hanatanja-tena aza ho atao e !